ZAKARIA 3.1-10 F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
ZAKARIA 3.1-10 F. 6
MPISORONABE MENDRIKA HO ANTSIKA (Hebreo 7.26)
Tontolon’ny fitsarana (1-3). Ny fahitana fahaefatra mampiseho an’i Jehovah ilay mpitsara marina manoloana an’ i Josoa mpisorona lehibe misalotra fitafiana maloto. Ny anton’ny fiampangana : Ny fahalotoana mihoapampana nisy teo amin’ny vahoaka Isiraely sy ireo mpisorony (endrik’ireo fitafiana) (Isaia 64.5). Teo an-kavanana kosa satana mpiampanga an’Isiraely. Aminy dia tsy mendrika ny fanavotana sy ny fitahian’Andriamanitra ireto vahoaka.
Mpisoronabe lafatra indrindra. Mitondra antsika sahady ho amin’i Jesoa sy ny asam-pamonjeny ny fahitana. Izy ilay Solofo nampanantenaina (8; Apokalipsy 22.16b), nasandratry ny Ray ho Mpisoronabe lehibe (vakio Hebreo 4.14). Izy ihany koa ilay vato fehizoro hananantsika fiorenana mafy (9; Salamo 118.22-23). Izy no hampitsahatra ny fiampangana antsika tamin’ny nahafatesany sy ny nitsanganany (Romana 8.33; 1Korintiana 6.11).
Tsarovy : Na miampanga antsika eo anatrehan’Andriamanitra andro aman’alina satana (vakio Apokalipsy 12.10), isika manana “Mpisolovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesosy Kristy, Ilay Marina” (1Jaona 2.1)
Tonga olom-baovao (2Korintiana 5.17 ). Izy no hanova ny trangam-piainantsika.
Ilay endrika fahalotoana ho tonga madio mangatsakatsaka (4; 2Korintiana 5.17).
Izy no mampisalotra antsika voninahitra (5).
Tsy niova ny teny fampaneken’i Jehovah ho an’Isiraely : «fanjaka-mpisorona, firenena masina» izy (Eksodosy 19.5-6) na dia tsy mendrika izany aza izy noho ny faharatsiany (Levitikosy 26.44). Toa izany koa isika, mpanota nefa hatsangany ho tonga zanaka mpandova (Romana 8.15-17).
Safidy misy fepetra. Tsy afaka manandra-tena ho mpanompo isika. Jesoa, ny Ray no nanandratra Azy ho mpisoronabe (Hebreo 5.5). Ireo nofidiny hanompo Azy sy hitandrina ny vahoakany tsy maintsy manetri-tena hizotra amin’ny lalany sy feno fankatoavana ka hitandrina ny didiny (7).